Home Wararka Maanta Farmaajo oo laga hor istaagay inuu ka qeyb galo shir caalami ah...
Farmaajo oo laga hor istaagay inuu ka qeyb galo shir caalami ah oo ka socda magaalada Brussels
Sida ilo diblumaasiyadeed oo lagu kalsoon yahay ay sheegayaan madaxweynaha mudo xileedkiisa dastuuriga ah uu dhamaaday 8 February 2021, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaan lagu casuumin shirka Midowga Yurub iyo Afrika oo ka socda magaaladda Brussels ee dalka Belgium-ka.
“Midowga Yurub ma casuumin madaxweynaha xilka ka degaya” ayay tibaaxeen ilo wareedyo si dhow ula socda furitaanka shirka #EUAUSummit iyo madaxda ka qayb galaysa.
Farmaajo oo xilka sii haya in ka badan hal sano oo sharci daro ka dib markii uu dhamaaday waqtii dastuurka KMG ah siiyay ayaa la kulmay dhaleeceynta xulafada reer galbeedka iyo daneeyayaasha gudaha ee Soomaaliya.
Xeeldheerayaasha ayaa fahamsan in guuldaradaan ay hor seeday siyaasada murugsan ee gudaha, maadaama Farmaajo ku guuldaraystay in uu abaaburo doorasho lagu kalsoonyahay oo waqtigeeda ku dhacda si loo helo dowlad cusub oo haysata sharciyad buuxda.
Midowga Yurub ayaa magaaladda Brussels ku soo dhaweeyay in ka badan 40 hoggaamiyeyaal Afrikaan ah si uu u soo ceshado saamayntiisa gobolka ama u dhiganta tan Shiinaha iyo Ruushka oo samaynaya maalgashi xoog leh.
Midowga Yurub ayaa balanqaaday in uu dalalka Afrika siin doono taageero xooggan si loo xoojiyo caafimaadka, waxbarashada iyo xasilloonida Afrika, wuxuuna ballan-qaadayaa kala bar maal-gashi cusub oo dhan 300 bilyan oo Yuuro ($ 340.9bn) oo la bilaabay si loola tartamo Hindisaha Belt iyo Road ee Shiinaha.
Laakin kulanka ayaa sidoo kale dhacaya sida Faransiiska iyo xulafadiisa ee dagaalka kula jira kooxaha hubeysan ee Mali ay sheegeen Khamiistii in ay bilaabayaan ka bixitaankooda militari ee dalkaasi.
“Halkan uma joogno inaan u sii wadno ganacsiga sidii caadiga ahayd,” madaxa Golaha Yurub Charles Michel ayaa ka sheegay shirkaan oo muhiim u ah qaarada.
Madaxweynaha Senegal Macky Sall, oo hadda ah guddoomiyaha Midowga Afrika, ayaa sheegay in ay “bilaw cusub u tahay iskaashiga dib u cusboonaysiinta”.
Madaxweynaha Sierra Leone Julius Maada Bio ayaa ku tartarsiiyay dadka reer Yurub inay xasuusnaadaan inay jiraan “bini’aadamka dhinaca kale” ee Afrika kuwaas oo looga tagay jawaabta caalamiga ah ee aan loo sinayn ee COVID-19, isagoo intaa ku daray in tani ay leedahay saameyn amni.
Madaxweynaha Koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa sheegay in isaga iyo hoggaamiyeyaasha kale ee Afrika ay soo qaadi doonaan arrinta ku saabsan xuquuqda lahaanshaha maskaxda ee tallaallada iyo daawaynta COVID.
Dalal badan oo soo koraya ayaa doonaya in xuquuqdan laga tanaasulo, laakiin waxa ay mucaaradnimo kala kulmaan dalalka qaniga ah, oo ay ku jiraan qaar badan oo ka tirsan Midowga Yurub.
Dhanka kale, Bangiga Maalgashiga Yurub wuxuu ku dhawaaqay Khamiista inuu diyaar u yahay 500 milyan oo Yuuro ($ 568m) oo deyn jaban ah oo la siinayo waddamada Afrika si loo xoojiyo nidaamyada daryeelka caafimaadka.
Lacagtaas deynta ah ayaa la filayaa inuu abaabulo wadar dhan 1 bilyan oo Yuuro ($ 1.1bn) maalgashi gaar ah iyo mid dadweyne, ayuu yiri bangigu.
W Gyude Moore, oo ah falanqeeye sare oo dhinaca siyaasadda ah oo ka tirsan Xarunta Horumarinta Caalamiga ah, ayaa soo dhaweeyay ballan qaadka maalgashiga oo uu sheegay in uu rajaynayo in ay bilaabato wada shaqaynta siman ee dhabta ah.